समाचार – Online Khabar
१. अस्ट्रेलियाको व्यवसायमा स्तर बढाउँदै नेपाली
२. त्यो हेटौंडा, यो हेटौंडा !
३. बालुवाटारमा ‘अश्लील रेकर्ड’ सुनेपछि हटाइएका मन्त्री सोडारी भन्छन्- परिबन्दमा परें
४. वामदेवलाई अर्को झड्का, प्राधिकरण गठन गरेर नेतृत्व दिन प्रधानमन्त्रीले मानेनन्
५. गोप्य तस्बिर बाहिरिएपछि प्रहरी गुहार्दै अक्सरा
६. सरकारले प्राथमिकता तोक्न सकेन, त्यसैले नतिजा आएन
७. मिटुमा फँसेका आलोकनाथलाई लाग्यो गतिलो झट्का
८. प्रहरीको गोप्य धन्दा ! जुवा र मिटर ब्याजमा मिलापत्र !
९. हाकिमको संगतले नेताहरु बिग्रिए : प्रचण्ड
१०. ‘चङ्गाचेट’मा दर्शक बढे, निर्देशक भन्छन्–‘मेरो भोगाई सधै यस्तै’
११. श्रीलंकाली संसदबाट राजापाक्षेविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित
१२. लैनचौरका डान्स बारबाट ३५ बालबालिकाको उद्दार, ३ सञ्चालक पक्राउ
त्यो हेटौंडा, यो हेटौंडा !
सरकारले प्राथमिकता तोक्न सकेन, त्यसैले नतिजा आएन
सफ्टवेरिका कलेजले पायो कोभेन्ट्री विश्वविद्यालयको सम्बन्धन
ग्लोबल आईएमई बैंक र एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता
आयो मोबाइल सेवाको गुणस्तरबारे अध्ययन रिपोर्ट, कुन पाटोमा को अब्बल ?
वार्षिकोत्सवमा कामना सेवा विकास बैंकद्वारा नगद तथा जिन्सी वितरण
विश्वकपको ट्रफी उचालेपछि सन्यास घोषणा
३२ असार, काठमाडौं । फ्रान्सका डिफेण्डर आदिल रामीले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास लिएका छन् । मार्सेलिएका डिफेण्डर रामीले विश्वकपको ट्रफी उचालेको भोलिपल्ट सन्यास लिएका हुन् । आइतबार राति विश्वकपको फाइनलमा फा्रन्सले क्रोएसियालाई ४-२ ले हराएको खेलमा उनी सब्स्िटच्युटका रुपमा मैदान प्रवेश गरेका थिए । ३२ वर्षका रामीले फा्रन्सका लागि ३५ खेल खेलेका छन् । उनले रुस […]
10 ४ महिना
ग्रिजम्यानले पत्रकार सम्मेलनमै उरुग्वेको झण्डा किन ओढे ?
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको उपाधि जितेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत हुँदा फ्रेन्च स्ट्राइकर एन्टोनी ग्रिजम्यानले उरुग्वेको झण्डा ओढेको देखियो । ग्रिजम्यानले दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र उरुग्वेप्रति आफ्नो झुकाव यसअघि पनि प्रकट गर्ने गरेका थिए । क्वार्टरफाइनलमा उरुग्वेविरुद्ध गोल गर्दा खुसी मनाएनन् । एथ्लेटिको मड्रिडबाट व्यवसायिक फुटबल खेल्ने उनको डियगो गोडिन र जोसे गिमेनेजसँग विशेष सम्बन्ध रहेको […]
क्रोयसियालाई फाइनलमा भाग्यले साथ दिएन !
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पहिलोपटक प्रयोग गरिएको भीएआर क्रोयसियाका लागि घातक बन्न पुग्यो । इभान पेरिसिकको ह्यान्ड बल फ्रेन्च खेलाडीहरुको अपिलपछि भीएआरमा गयो र रेफ्रीले पेनाल्टीको निर्णय लिए । पेनाल्टीलाई गोलमा परिणत गर्दै एन्टोनी गि्रजम्यानले फ्रान्सलाई २-१ को अग्रता दिलाए । र, अन्ततः क्रोयसियाले फ्रान्सलाई ४-२ को नतिजा सुम्पियो । फाइनलको दुर्भाग्यले क्रोयसियाका प्रशिक्षक […]
पेलेलाई पछ्याउँदै एम्बाप्पे, बने उत्कृष्ट युवा खेलाडी
काठमाडौं । फ्रान्सका केलियन एम्बाप्पेले पेलेपछि विश्वकपको फाइनलमा गोल गर्ने युवा खेलाडी बनेका छन् । फ्रान्सले क्रोएसियालाई ४–२ ले हराएर विश्वकप जित्दा एम्बाप्पेले पनि गोल गरे । १९ वर्ष २०७ दिनका एम्बाप्पे पेलेपछि विश्वकपको फाइनलमा गोल गर्ने युवा खेलाडी हुन् । सन् १९५८ को विश्वकपमा गोल गर्दा पेले १७ वर्ष २४९ दिनका थिए । यसअघि […]
काठमाडौं । क्रोएसियाका कप्तान लुका मोडरिक विश्वकपका उत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन् । शनिबार भएको फाइनलमा क्रोएसिया फ्रान्ससँग ४–२ ले हारेको थियो । तर, मोडरिक उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन् । उनले गोल्डेन बल जिते । चार वर्ष अघि अर्जेन्टिनाका लिओनल मेस्सीको अवसथा यस्तै थियो । फाइनलमा अर्जेन्टिना जर्मनीसँग हारेको थियो तर, मेस्सीले गोल्डेन बल जितेका […]
३१ असार, काठमाडौं । इंग्ल्याण्डका पूर्वखेलाडी साथै अहिलेका फुटबल पण्डित गेरी लिनेकेरले रसिया विश्वकपमा सबैभन्दा उत्कृष्ट खेलाडी फ्रान्सका एन्जेलो कान्टे रहेको र फाइनलमा उनको प्रभाव देखिने बताएका छन् । पोउल पोग्वासँगै फ्रान्सको मिडफिल्डमा राम्रो खेल देखाइरहेका कान्टेले डिफेन्स र अट्याक दुवैमा उस्तै सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । क्रोएसियासँग आइतबार राति पौने ९ बजे हुने फाइनलमा पनि […]
हजार्डले गरे रियल मड्रिड जाने संकेत
३१ असार, काठमाडौं । विश्वकपमा तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा इंग्ल्याण्डलाई २-० ले हराएपछि स्टार खेलाडी इडन हजार्डले अब आफूले क्लब फुटबलमा केही नयाँ गर्ने बेला आएको बताएका छन् । उनको भनाइ इंग्लिस क्लब चेल्सी छाडेर स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड जानेतिर संकेत गरिएको फुटबल पण्डितहरुको बुझाइ छ । ‘मेरो गन्तव्य के हुने भन्ने तपाईंहरुलाई राम्ररी […]
विश्वकप उपाधि : फ्रान्सले जित्ला कि क्रोएसियाले इतिहास रच्ला ?
३१ असार, काठमाडौं । एक महिनाअघि सुरु भएको विश्वकप फुटबल आज सकिदैछ । विश्वकपको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षण अर्थात उपाधि जित्ने टिमको छिनोफानो आइतबार राति पौने ९ बजे क्रोएसिया र फ्रान्सबीचको खेलले लगाउनेछ । मस्कोको लुजिन्की रंगशालामा दुवै टिम आफ्नो पुरानो लय कायम राख्न चाहन्छन् । फाइनल खेल फ्रान्सले जितेमा उसले विश्वकप उपाधि संख्या दुई पर्‍याउनेछ […]
इंग्ल्याण्डलाई हराउँदै बेल्जियम बन्यो तेस्रो
काठमाडौं । इंग्ल्याण्डलाई हराउँदै बेल्जियम विश्वकप फुटबलमा तेस्रो बनेको छ । शनिबार भएको खेलमा बेल्जियमले इंग्ल्याण्डलाई २–० गोल अन्तरले हराएको हो । सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको खेलमा बेल्जियमले चौथो मिनेटमा नै थोमस मुनिरको गोलबाट अगता लिएको थियो । प्रभावशाली प्रदर्शन गरेका इडेन हर्जाडले निर्धारित समयको खेल सकिन ७ मिनेट बाँकी छँदा गोल गर्दै जित सुनिश्चित गरे । […]
विश्वकप फाइनल खेलाउने रेफ्री अर्जेन्टिनाका
२९ असार, काठमाडौं । फ्रान्स र क्रोएसियाबीच हुने विश्वकप फुटबलको फाइनल खेल अर्जेन्टिनाका नेस्टोर पिटानाले खेलाउने भएका छन् । आइतबार राति पौने ९ बजे हुने विश्वकप फाइनल खेल मस्कोको लुजिन्की रंगशालामा हुनेछ । रसिया विश्वकपमै यसअघि चार खेल खेलाइसकेका उनलाई लायन्सम्यानमा अर्जेन्टिनाकै हर्नान मेडाना र जुआन पाब्लो बेलाटीले सघाउने छन् । शारीरिक शिक्षाका शिक्षकसमेत रहेका […]
श्रीमतीले मेस्सीभन्दा रोनाल्डो मन पर्छ भनेपछि डिभोर्स !
२९ असार, काठमाडौं । स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेस्सी र क्रिष्टियानो रोनाल्डोका कारण विवाह गरेको १४ वर्षपछि एक जोडीको सम्बन्धविच्छेद भएको छ । विश्वकप फुटबलका बेला मेस्सीको खेल नराम्रो भनेर आलोचना गरेपछि रसियामा ४० वर्षका आर्सेनले ३७ वर्षकी श्रीमती लिउडमिलासँग सम्बन्धविच्छेद गरेका हुन् । खेल मन पराउने उनीहरु दुवै जनाको भेट पनि विश्वकपकै बेला भएको थियो […]
क्रोएसियासँग हारे पनि हाम्रो शीर उचो छः हृयारी केन
काठमाडौं । इंग्ल्याण्ड फुटबल समर्थकले फ्रान्ससँगको विश्वकप फाइनल सोचिसकेका थिए । उपाधि घर आउने भयो भनेर उत्साहित भइरहेका बेला एक गोलको अग्रता जोगाउन नसकेर इंग्ल्याण्ड क्रोएसियासँग २-१ ले पराजित भयो । पराजय धेरैलाई विश्वास गर्न कठीन भइरहेको भए पनि उनीहरु यसपटक इंग्ल्याण्ड फुटबलले सफलता पाएको सम्झेर खुसी छन् । समूह चरणमा बेल्जियमसँगको अन्तिम खेल हारेर […]
खेलअघि इंग्ल्याण्ड बलियो, खेलपछि क्रोएसिया
२८ असार, काठमाडौं । विश्वकप सुरु हुनुअघि क्रोएसियालाई कसैले धेरै पर सोचेका थिए भने त्यो क्वार्टरफाइनलसम्म थियो । सेमिफाइनलमा इंग्ल्याण्डलाई २-१ ले हराएर क्रोएसियाले आफूलाई कमजोर आँक्नेलाई गतिलो जवाफ दिएको छ । इंग्ल्याण्डविरुद्धको खेलमा ६८ औं मिनेटमा बराबरी गोल गरेका पेरेसिकले पनि कसैले नसोचेको ठूलो उपलब्धी आफूहरुले पाएको बताएका छन् । ‘यो व्याख्या गर्नै सकिदैन […]
इङ्ल्यान्डलाई हराउँदै क्रोएसिया पहिलोपटक विश्वकपको फाइनलमा
२८ असार, काठमाडौं । इङ्ल्यान्डलाई स्तब्ध पार्दै क्रोएसिया पहिलोपटक विश्वकप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ । बिहीबार भएको खेलमा इङ्ल्यान्डलाई २–१ को गोल अन्तरले हराउँदै क्रोएसिया फाइनलमा पुगेको हो । इङ्ल्यान्ड २८ वर्षपछि विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको थियो । तर उसको थप यात्रा क्रोएसियाले रोकिदिएको छ । खेलको पाँचौं मिनेटमा कायरन ट्रिपियरले इङ्ल्यान्डका लागि गोल गर्दै शुरुवाती […]
विश्वकपः क्रोएसियाको मिडफिल्ड कि इंग्ल्याण्डको अट्याक ?
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा बुधबार राति पौने १२ बजे इंग्ल्याण्ड र क्रोएसियाबिच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । खेल मस्कोमा रहेको लुजिन्की रंगशालामा हुनेछ । इंग्ल्याण्डले समूह चरणमा ट्युनिसियालाई २–१, पानामालाई ६–१ ले हराएको थियो भने बेल्जियमसँग १–० ले हारेको थियो । अन्तिम १६ मा कोलम्बियासँग १–१ को बराबरीपछि टाइबे्रकरमा ४–३ ले विजयी भएको इंग्ल्याण्डले क्वाटरफाइनलमा […]
इंग्ल्याण्ड भर्सेस क्रोएसिया– के भन्छन् प्रशिक्षक ?
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको दोस्रो सेमिफाइनलमा बुधबार राति पौने १२ बजे इंग्ल्याण्ड र क्रोएसिया मस्कोमा रहेको लुजिन्की रंगशालामा खेल्दै छन् । समूह चरणदेखि नै अपराजित रहेको क्रोएसिया र यसअघि एक खेल हारेको इंग्ल्याण्डबीचको विजेताले फाइनलमा फ्रान्सको सामना गर्ने छ । क्रोएसियाका प्रशिक्षक जाल्को डेलिक र इंग्ल्याण्डका प्रशिक्षक ग्यारथ साउथगेट आफूहरु संयमित रहेर खेल्ने र फाइनलमा […]
रियलमा रोनाल्डोको स्थान कसले लेला ?
काठमाडौं । स्टार स्ट्राइकर क्रिष्टियानो रोनाल्डो १ सय १२ मिलियन युरोमा इटालियन क्लब युभेन्टस गएपछि स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले उनको स्थानमा कसलाई ल्याउँछ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । रोनाल्डोले वर्षको २६ मिलियन पाउण्ड पाउने गरी इटालियन च्याम्पियन युभेन्टससँग चार वर्षको सम्झौता गरेका छन् । रोनाल्डो ३३ वर्षको उमेरमा विश्वकै चौथो मंहगा खेलाडी हुँदै युभेन्टस […]
विश्वकप फाइनल खेल्ने सपनामा पनि सोचेको थिइनँः एम्बाप्पे
२७ असार, काठमाडौं । फ्रान्सेली प्रशिक्षक डिडियर डेसच्याम्प्सलाई खेलाडी र प्रशिक्षक दुवैको रुपमा विश्वकप जित्ने तेस्रो व्यक्ति बन्न अब एक मात्र जित आवश्यक छ । सन् १९९८ को डेसम्याम्प्सको कप्तानीमा फ्रान्सले विश्वकप जित्दा केलियन एम्बाप्पे जन्मिएका समेत थिएनन् । तर, अहिले डेसम्याम्प्सकै प्रशिक्षिकत्वमा एम्बाप्लेले रुसमा उत्कृष्ट प्रर्दशन गरिरहेका छन् । मंगलबार बलियो बेल्जियमलाई हराएपछि फाइनलमा […]
१२ वर्षपछि फ्रान्स फाइनलमा, वेल्जियम १-० ले निराश
२७ असार, काठमाडौं । वेल्जियमलाई १- ० ले हराउँदै फ्रान्स विश्वकप फुटबलको फाइनल प्रवेश गरेको छ । फ्रान्सलाई जिताउन एकमात्र गोल खेलको ५१ औं मिनेटमा स्यामुअल उमटीटीले गरे । चालु विश्वकपमा एक खेल पनि नहारेको वेल्जियम सेमिफाइनलमा फ्रान्ससँग पराजित हुन पुग्यो । वेल्जियमले गोलका केही सुन्दर अवसरहरु पनि सिर्जना गरेको थियो । तर गोल गर्न […]
जर्मनी, अर्जेन्टिना र ब्राजिललाई नफापेको कजान
२६ असार, काठमाडौं । रसिया विश्वकप सुरु हुनु अघिदेखि नै ११ सहरका १२ रंगशालाको विशेष चर्चा भयो । ८१ हजार दर्शक क्षमताको लुजिन्की रंगशालासँगै ३५ हजार दर्शक क्षमताको एकाटेरिङवर्ग रंगशालासम्म दर्शकको नजरमा परे । अहिले विश्वकप सेमिफाइनलसम्म आइपुग्दा विशेष चर्चा भने कजान रंगशालाले पाएको छ । विश्वकप दाबेदारीमा रहेका विशेष तीन टिम जर्मनी, अर्जेन्टिना र […]
रसियन प्रशिक्षकको समर्थन बेल्जियमलाई, भन्छन् – फ्रान्सलाई हराउँछ
२६ असार, काठमाडौं । रसियाका प्रशिक्षक स्टानिस्लाभ चेर्चेस्वोभले विश्वकपमा रसिया क्वार्टरफाइनलबाट बाहिरिएकाले अब आफ्नो समर्थन बेल्जियमलाई रहने बताएका छन् । विश्वकप फुटबलमा मंगलबारदेखि सेमिफाइनलका खेल हुँदै छन् । राति पौने १२ बजे हुने पहिलो सेमिफाइनलमा बेल्जियमले फ्रान्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । प्रशिक्षक चेर्चेस्वोभले आफ्नो इच्छा बेल्जियमले सेमिफाइनल मात्रै नभएर विश्वकपको उपाधि नै उचालोस् भन्ने रहेको बताएका […]